အခုနွေရာသီမှာ ကလပ်စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ကြေး အသုံးပြုခဲ့တဲ့ လာလီဂါ(၈)သင်း
28 Jul 2018 . 10:03 PM
နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့ကာလအတွင်းမှာ ကလပ်အသင်းတိုင်းက မျှော်လင့်ချက်ကိုယ်စီနဲ့ ကစားသမားသစ်တွေကို ခေါ်ယူအားဖြည့်နေကြတာ ပရိသတ်တွေ အသိပါပဲ။ တခြားအသင်းတွေလိုပဲ လာလီဂါကလပ်အသင်းတွေကလည်း ရာသီသစ်မှာ အောင်မြင်မှုရဖို့အတွက် ငွေကြေးသုံးစွဲပြီး ကစားသမားသစ်တွေ ခေါ်ယူနေကြပါတယ်။ အခုလောလောဆယ် လာလီဂါမှာ ကလပ်အသင်းစံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ကြေး အသုံးပြုထားတဲ့ ကလပ်(၈)သင်းအထိ ရှိနေပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီအသင်းတွေထဲမှာ ထိပ်သီးနှစ်သင်းဖြစ်တဲ့ ဘာစီလိုနာနဲ့ ရီးယဲလ်တော့ မပါသေးပါဘူး။ ကလပ်စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ကြေး အသုံးပြုထားတဲ့ လာလီဂါ(၈)သင်းကတော့ အက်သလက်တီကို၊ အလာဗတ်စ်၊ အီဘာ၊ အက်စ်ပန်ညို၊ ဟီရိုနာ၊ ဗယ်လက်ကာနို၊ ဗီလာရီးယဲလ်နဲ့ ဒီရာသီမှာ ပထမဆုံးအကြိမ် တန်းတက်လာတဲ့ ဟွက်စ်ကာ အသင်းတို့ဖြစ်ပြီး ဒီထဲမှာ ငွေအများဆုံးသုံးခဲ့တဲ့အသင်းက အက်သလက်တီကိုပါ။
အက်သလက်တီကိုအသင်းဟာ မိုနာကိုအသင်းက ပြင်သစ်ကွင်းလယ်ကစားသမား လူမာ Lemar ကို ခေါ်ယူခဲ့တာမှာ ယူရိုသန်း(၇၀)အထိ သုံးစွဲခဲ့တယ်။ ဒုတိယအများဆုံးက ဗီလာရီးယဲလ်ဖြစ်ပြီး အက်စ်ပန်ညို တိုက်စစ်မှူး မော်ရီနို Moreno ကို ယူရိုသန်း(၂၀)နဲ့ ခေါ်ယူခဲ့တာပါ။ ကျန်တဲ့အသင်းတွေကတော့ ယူရို(၁၀)သန်းနဲ့အောက်သာ သုံးစွဲခဲ့ကြပေမယ့် ကိုယ့်အတိုင်းအထွာနဲ့ ကိုယ်ဆိုတော့ ဒီပမာဏကလည်း ကလပ်စံချိန်တင်တွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနွေရာသီမှာ ကလပ်စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ကြေးနဲ့ ကစားသမားခေါ်ယူခဲ့တဲ့ လာလီဂါကလပ်အသင်းတွေနဲ့ ကစားသမားတွေကို ပရိသတ်တွေအတွက် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ် . . .
အက်သလက်တီကို – လူမာ -ယူရို(၇၀)သန်း
ဗီလာရီးယဲလ် – မော်ရီနို – ယူရို(၂၀)သန်း
အက်စ်ပန်ညို – အစ်ဂလီစီယာ – ယူရို(၁၀)သန်း
ဟီရိုနာ – မိုယီကာ – ယူရို(၆)သန်း
အီဘာ – အယ်လ်ဗာရက်ဇ် – ယူရို(၄)သန်း
အလာဗတ်စ် – ဂွီဒက်တီ – ယူရို(၄)သန်း
ဗယ်လက်ကာနို -ကာကူတာ – ယူရို(၂.၂)သန်း
ဟွက်စ်ကာ – အက်စ်ရီချီ – ယူရို(၀.၈)သန်း
အခုနှရောသီမှာ ကလပျစံခြိနျတငျပွောငျးရှကွေ့ေး အသုံးပွုခဲ့တဲ့ လာလီဂါ(၈)သငျး
နှရောသီအပွောငျးအရှကေ့ာလအတှငျးမှာ ကလပျအသငျးတိုငျးက မြှျောလငျ့ခကျြကိုယျစီနဲ့ ကစားသမားသဈတှကေို ချေါယူအားဖွညျ့နကွေတာ ပရိသတျတှေ အသိပါပဲ။ တခွားအသငျးတှလေိုပဲ လာလီဂါကလပျအသငျးတှကေလညျး ရာသီသဈမှာ အောငျမွငျမှုရဖို့အတှကျ ငှကွေေးသုံးစှဲပွီး ကစားသမားသဈတှေ ချေါယူနကွေပါတယျ။ အခုလောလောဆယျ လာလီဂါမှာ ကလပျအသငျးစံခြိနျတငျပွောငျးရှကွေ့ေး အသုံးပွုထားတဲ့ ကလပျ(၈)သငျးအထိ ရှိနပေါပွီ။ ဒါပမေဲ့ အဲဒီအသငျးတှထေဲမှာ ထိပျသီးနှဈသငျးဖွဈတဲ့ ဘာစီလိုနာနဲ့ ရီးယဲလျတော့ မပါသေးပါဘူး။ ကလပျစံခြိနျတငျပွောငျးရှကွေ့ေး အသုံးပွုထားတဲ့ လာလီဂါ(၈)သငျးကတော့ အကျသလကျတီကို၊ အလာဗတျဈ၊ အီဘာ၊ အကျဈပနျညို၊ ဟီရိုနာ၊ ဗယျလကျကာနို၊ ဗီလာရီးယဲလျနဲ့ ဒီရာသီမှာ ပထမဆုံးအကွိမျ တနျးတကျလာတဲ့ ဟှကျဈကာ အသငျးတို့ဖွဈပွီး ဒီထဲမှာ ငှအေမြားဆုံးသုံးခဲ့တဲ့အသငျးက အကျသလကျတီကိုပါ။
အကျသလကျတီကိုအသငျးဟာ မိုနာကိုအသငျးက ပွငျသဈကှငျးလယျကစားသမား လူမာ Lemar ကို ချေါယူခဲ့တာမှာ ယူရိုသနျး(၇၀)အထိ သုံးစှဲခဲ့တယျ။ ဒုတိယအမြားဆုံးက ဗီလာရီးယဲလျဖွဈပွီး အကျဈပနျညို တိုကျစဈမှူး မျောရီနို Moreno ကို ယူရိုသနျး(၂၀)နဲ့ ချေါယူခဲ့တာပါ။ ကနျြတဲ့အသငျးတှကေတော့ ယူရို(၁၀)သနျးနဲ့အောကျသာ သုံးစှဲခဲ့ကွပမေယျ့ ကိုယျ့အတိုငျးအထှာနဲ့ ကိုယျဆိုတော့ ဒီပမာဏကလညျး ကလပျစံခြိနျတငျတှဖွေဈခဲ့ပါတယျ။ ဒီနှရောသီမှာ ကလပျစံခြိနျတငျပွောငျးရှကွေ့ေးနဲ့ ကစားသမားချေါယူခဲ့တဲ့ လာလီဂါကလပျအသငျးတှနေဲ့ ကစားသမားတှကေို ပရိသတျတှအေတှကျ ဖျောပွလိုကျပါတယျ . . .
အကျသလကျတီကို – လူမာ -ယူရို(၇၀)သနျး
ဗီလာရီးယဲလျ – မျောရီနို – ယူရို(၂၀)သနျး
အကျဈပနျညို – အဈဂလီစီယာ – ယူရို(၁၀)သနျး
ဟီရိုနာ – မိုယီကာ – ယူရို(၆)သနျး
အီဘာ – အယျလျဗာရကျဇျ – ယူရို(၄)သနျး
အလာဗတျဈ – ဂှီဒကျတီ – ယူရို(၄)သနျး
ဗယျလကျကာနို -ကာကူတာ – ယူရို(၂.၂)သနျး
ဟှကျဈကာ – အကျဈရီခြီ – ယူရို(ဝ.၈)သနျး